Iziphequluli ku-GNU / Linux Yikuphi okufanele ukhethe? | Kusuka kuLinux
Iziphequluli ku-GNU / Linux Yikuphi okufanele ukhethe?
Enye yezinzuzo ze Isofthiwe yamahhala Akungabazeki ukuthi inketho yokukwazi ukusebenzisa nokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ngokuya ngezintandokazi nezidingo zethu. Abasebenzisi be I-GNU / Linux sikhiphe izinqolobane ze- Software yekhwalithi enhle kakhulu phakathi kwayo okuyiqiniso iziphequluli zewebhu. Kepha umbuzo uthi kufanele ukhethe yiphi?
Impi phakathi kweziphequluli ikhishwe ngendlela engakaze yenzeke ngaphambili. Ngiyavuma ukuthi inhlamvu bekuwukufika kwe- Chrome nezinga eliphezulu lokuthuthuka, elikubeke ngokushesha phakathi kwesinye seziphequluli ezisetshenziswa kakhulu, ngaphezu kwamanye amangwevu afana Opera.
I-Mozilla, IMicrosoft, i-Opera Abazange bafune ukusala emuva futhi ngenxa yalokho, ngayinye yezinkampani izama ukuletha umkhiqizo ongcono ngesikhathi esincane. Kepha ake sibuyele ezinqolobaneni.
Thatha izinqolobane ze- Ukuhlolwa kwe-Debian. Phakathi kweziphequluli ezinesibonisi sokuqhafaza esingasifaka sinazo: I-Iceweasel, Chromium, Midori, Epiphany, Arora, Chimera2, Konquark, Iceape, Rekonq neXXTerm.
Ngamunye onezici ezithile ezisuka ku-minimalism ukufaka izinketho eziphelele kakhulu nezandiso. Lokhu akushiwo isoftware yomuntu wesithathu, efana neyayo Opera, ukuthi yize kungenjalo Open Source, uma sikwazi ukuyifaka futhi siyisebenzise mahhala.
1 Ijubane, ukusebenza noma ubuchwepheshe?
1.4 Ukusebenziseka nePlatform.
2 Manje sikhetha muphi?
Ijubane, ukusebenza noma ubuchwepheshe?
Kunezici eziningana okufanele zicatshangelwe lapho ukhetha isiphequluli. Singathatha ama-3 ayisisekelo ngokusetshenziswa ofuna ukukunika khona.
Kule nkinga, cishe bahlala bevelele Chromium yize ungeke uyeke ukugqamisa Epiphany, isiphequluli I-Gnome. Vele, into ebalulekile ukuthi umkhawulokudonsa okufanele uhambe ngawo. Uma usebenzisa KDE, Konquark y URekonq ziyindlela enhle kakhulu, noma ezimbili zokuqala ezishiwo ngenhla.
Enye into esiza kakhulu isivinini salezi ziphequluli ukuthi bayiphatha kanjani i-cache. Kuze kube manje okuhamba phambili kulokhu kube Opera okwami, kulandelwe Chromium.
Kepha okuhle ngejubane kulezi "zilo", abanakho ekusebenzeni. Uma uneqembu elisebenza kahle ngeke ube nezinkinga, kepha uma kungenjalo, ungakhetha izinketho ezilula.
Yilapho kungena khona ukudlala Midori y I-XXXTerm yiphi besesivele sikhulumile en <° I-Linux. Endabeni ye Midori Kancane kancane ibilokhu ifaka ezinye izinketho, ngakho-ke angingabazi ukuthi maduze izophela ukuba inketho maqondana nokonga izinsiza.
Amasayithi amaningi avuselelwe ngokufika kwefayela le- I-HTML5 + CSS3 futhi uma ukhona Unjiniyela wewebhu Noma nje awufuni ukuphuthelwa ngamathuba ahlinzekwa yilobu buchwepheshe obusha, njengoba kuzodingeka usebenzise iziphequluli ezinkulu nezithandwa kakhulu, ngokuvamile ezisekela lokhu.
Singangeza izinto ezimbili okufanele sizicabangele futhi, ekugcineni, abaningi basebenzisa isiphequluli kuphela ukuthi siyini: ukuntweza inetha, ngakho-ke abadingi izinketho eziningi noma izengezo, uhlelo nje olune-interface elula ngangokunokwenzeka. Chrome lapha wabeka iphethini futhi nabanye balandela. Umphumela? Isikhala esiningi sokuqukethwe, izinkinobho eziqoqiwe, nokulula kuyo yonke indawo.
Firefox amathuluzi Vumelanisa, ithuluzi elisivumela ukuthi sibe nemininingwane yethu kusuka noma yikuphi lapho sixhuma khona. Opera unayo Unite, into efanayo kakhulu. FUTHI I-Chromium / i-ChromeHhayi, angazi, kepha angingabazi ukuthi bazokwenza okuthile ngakho kungekudala uma bengakakwenzi. Zonke zingafakwa ku- Linux, Windows o Mac futhi ngisho, sezivele zingena kwamanye amapulatifomu afana ne- Android.
Manje sikhetha muphi?
Uxolo, kepha angikwazanga ukuphendula ngqo lo mbuzo. Imvamisa ngisebenzisa Firefox (Ngibhala manje inguqulo 7 b1) kepha ngihlala ngifaka Opera y Chromium njengenye indlela. Ngihlala ngithola kokunye, okunye okungekho.
Okungcono kakhulu abangakwenza ukusebenzisa ukuphela:
futhi uwahlole ukuze ubone ukuthi iyiphi evumelana nabo kakhulu. Ngenhlanhla ungene I-GNU / Linux sinokuningi, okuningi ezinqolobaneni, njengasemasayithini esiphequluli ngasinye.
Yimuphi oyisebenzisayo futhi kungani?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Iziphequluli ku-GNU / Linux Yikuphi okufanele ukhethe?
Kuthiwani ngo-Elav, injabulo yokuthi sebebuyile vele.
Ngokuqinisekile iziphequluli ezihamba phambili yi-firefox, i-chrome ne-opera, ngine-firefox ne-opera efakiwe, futhi engiyisebenzisa kakhulu yi-firefox. Ngokuyinhloko ngithanda i-firefox kakhulu ngezandiso, ukuthi yize ezinye iziphequluli zinazo, i-d firefox ihlangabezana nokulindela kwami ​​ngaphezulu, noma ngabe uma, emshinini wami isebenza ngokushesha kulayishwa amakhasi.
Ngithanda iFirefox kakhulu ngoba iyona engikhombisa kahle izinto zamawebhusayithi (ibhokisi lokuhlola, ama-radiobuttons, amafonti), into abanye abangawenzi kahle kwesinye isikhathi, ikakhulukazi i-Opera. I-Opera yinhle, ngine-Opera Next efakiwe futhi ishesha kakhulu, kepha nginezinkinga ezi-4 ngayo:
1- Isebenzisa i-RAM eningi kakhulu.
2- Ku-WordPress angikwazi ukukhulisa usayizi wezithombe engizifaka.
3- Akungikhombisi kahle ezinye izinto.
4- Akuyona i-Free Software.
Namuhla nje bengibona i-Epiphany ukubona ukuthi kunjani. Bengivivinya ukuthi ngabe lokhu kungavimba yini ukuthi i-laptop ingafudumali kancane (iFirefox manje isebenzisa inqama encane, kepha isasebenzisa isilinganiso sayo esihle sokucubungula ... ukubuyela emuva okuxolelwe ukuqina okukhulu kwesiphequluli; D).
Ngizobona abanye benokuthi iyiphi engikhonza kangcono kulokho 🙂
Ngiyisebenzise isikhashana, kepha yanginika inkinga encane nge-https yingakho ngiyilahlile. Noma kunjalo, into engcono kakhulu ongayenza ukuthi, zizame zonke bese ubona ukuthi yikuphi okukufanele kakhulu.
Ukubingelela nokubonga ngokuma lapha .. 😀
I-athikili enhle, ngiyabonga, ibhulogi yakho isivele 'iyizintandokazi'.
Ukungeza nje engxoxweni, qaphela ukuthi i-Chrome-Chromium ifaka phakathi nethuluzi layo lokuhlanganisa elihlanganisiwe ngama-akhawunti we-g-mail (empeleni balisebenzisa isikhathi eside ngaphambi 'komncintiswano')
Ekugcineni, ngokuvumelana ngokuphelele nesiphetho, into ebalulekile ukuthi isiphequluli sifeza inhloso yaso futhi akukaze kube buhlungu ukuba nabambalwa besondele ukuze basebenzise izici zabo ezinhle kakhulu.
Yebo, besengivele ngimangele ukuthi iChromium / Chrome ayinayo into enjalo, kepha njengoba ngingayisebenzisi njalo, bengingafuni ukukhuluma kakhulu ...
Ngiyabonga ngokusinda nangamazwana akho 😀
Kuhle kakhulu okuthunyelwe. Ngokwami, ngizizwa ngikhululeke kakhulu nge-Opera neFirefox, yize kungazelelwe ngisebenzisa iCrome. Ngeshwa, bobathathu banginike inkinga eyodwa noma enye kuFedora 15: Ku-Opera inkinobho "yokubuyela ekhasini langaphambilini" ayisebenzi kahle ngoba esikhundleni sokubuyisa, igcina ilayishe kabusha ikhasi lamanje. IFirefox ayilandeli izixhumanisi kusesho lwe-google (ingithumela ekhasini lasekhaya) ngaphandle kokuthi ngiyiphoqa ukuthi ivule isixhumanisi kuthebhu entsha. Futhi i-Chrome, enezandiso noma ezingenazo, ayibonisi konke okuqukethwe kwamanye amakhasi.
Uff. Unenkinga ngeziphequluli hahahaha. Yebo, ngenhlanhla akwenzeki lokho kimi. Umbuzo owodwa Ingabe unamabhithi angama-32 noma angama-64?
WOW ... Ngisebenzisa i-OperaNext (v12) futhi konke kuhle, izinkinga kuphela ngamasayithi weWordPress kepha okunye, ngijabule.
IFirefox ayikaze inginike amaphutha, idla kakhulu futhi ihamba kancane (kuqhathaniswa ne-OperaNext neChromium)
Futhi i-Chrome angiyazi, kepha i-Chromium ngiyibona kahle, inkinga oyishoyo angikaze ngiyithole.
Noma kunjalo, kufanele ubuyekeze izinhlobo ozisebenzisayo noma okufana nalokho, ngoba kuyaqabukela (kuyivelakancane) ukuthi iziphequluli ezintathu zikunikeze izinkinga.
Ngisanda kuvuselela i-Opera yaba ngu-11.51 futhi ngokusobala angisenayo inkinga eshiwo. Into ye-Chrome, njengoba ngicabanga ukuthi ngiyifundile, kungenxa yengxabano ku-Fedora 15 firewall, kepha njengoba kuyisiphequluli engisebenzisa okuncane kokuthathu, angikaze ngizame ukuthola isisombululo. NgeFirefox, angazi ukuthi yini efanelekile (futhi kufanele ngisho ukuthi akwenzeki njalo).
Kunezinto engingaziqondi okwamanje, ikakhulukazi ngeFirefox. Usebenzisa inguqulo efanayo ku-Debian ne-pendrive nge-Ubuntu, kunezindawo ezingabukeki zizinhle ku-Debian. 😕
Ngiyaziphendula. Inkinga obukhuluma ngayo yehlele kimi ngoba ngiguqule mathupha ukuthi amafonti akhonjiswa kanjani kwiFirefox.
lucas matias kusho
Umbiko omuhle elav manje ngivivinya u-Arora, kusesekuseni ukuthola iziphetho kodwa kuhamba kahle.
Phendula ama-lucas Matias
Ngingumlandeli weziphequluli, ngifuna isivinini kuphela, bengilokhu ngivivinya zonke iziphequluli iminyaka emi-5, njengamanje ngivela e-Epiphany futhi ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu, kuyashesha kodwa akukho okuvela komunye umhlaba, uma kufanele ngihlele ukuthi iziphi Yisona esisheshayo, ngiqala nge-opera ngokulandelayo ngaphandle kokungabaza ukuthi iyashesha kakhulu kepha inokuqina okuthile, i-chromium yesibili midori kanye ne-epiphany.
Ngikhohliwe ukusho ukuthi ngihlala neSlimBoat
Phendula ku- curlconbarra@hotmail.com
I-Chrome izohlala ingcono kakhulu kimi kepha ngisebenzisa i-Opera ngoba ku-Chrome isikrini siyama lapho ngifaka i-YouTube ... angazi ukuthi kungani
ABASEBENZI BE-LINUX !!
Ngicabanga ukuthi iMozilla yisiphequluli esihle kakhulu, kepha sisebenzisa TOO MUCH RESOURCE. Izandiso zayo kanye nentuthuko zikwenza kube yintandokazi yabaningi.
Imayini ekude kakhulu ezindabeni ze-Performance-Optimization-Fluency lapho upheqa ... phakathi kwezinye izinto eziningi ezingenze ngathutha unomphela ngivela ku-Chrome / Chronium, yiVivaldi (bengiyisebenzisa cishe izinyanga eziyi-6) futhi ngingafakazela imiphumela yayo ngendlela okuhle.
Zama i-VIVALDI, enconywe kakhulu
Ungabathola kanjani abangena ngaphakathi kunethiwekhi yakho ye-Wi-Fi
I-FreeOffice 3.4.3 iyatholakala ukulanda